လူနာမည်များကို သုံးထားသည့် ထူးခြားသော အင်္ဂလိပ်အသုံးအနှုန်းများ - အပိုင်း (၁) - Myanmar Network
လူနာမည်များကို သုံးထားသည့် ထူးခြားသော အင်္ဂလိပ်အသုံးအနှုန်းများ - အပိုင်း (၁)
Posted by Language Republic on October 9, 2015 at 11:11 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Bob's your uncle (ဘော့ဘ်က မင်းဦးလေးလေ။)
အခြားအသုံးများသော အသုံးအနှုန်းများစွာကဲ့သို့ပင် Bob's your uncle (ဘော့ဘ်က မင်းဦးလေး = ကိစ္စတစ်ခုကို မည်မျှလွယ်ကူစွာလုပ်၍ရကြောင်း ဖော်ပြရာတွင် သုံးသောစကား) ၏ တိကျသော မူလဇစ်မြစ်ကို သေချာစွာ မသိရှိကြပေ။
လူကြိုက်အများဆုံး ယူဆချက်တစ်ခုမှာ ၁၈၈ဝ ခုနှစ် နှောင်းပိုင်းနှစ်များတွင် nepotism ခေါ် မိမိအာဏာရှိလာသောအခါ မိမိ၏ မိသားစုဝင်ဆွေမျိုးသားချင်းများအား အလုပ်အကိုင်ကောင်းများ ပေးခြင်း ကိစ္စရပ်တစ်ခုနှင့် ပတ်သက်မှုရှိနေပါသည်။ နိုင်ငံရေးဝေဖန်သူ များသည် ငယ်ရွယ်၍ အတွေ့အကြုံမရှိသော Arthur Balfour (အာသာဘယ်လ်ဖော) (နောင်တွင် United Kingdom အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၏ ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာသူ) က ရာထူးနေရာ အမျိုးမျိုးသို့ ရွေးချယ်ခြင်းခံနေရသဖြင့် အံ့အားသင့်ကုန်ကြသည်။ အလွန်ပင်ဂုဏ်အရှိန်အဝါမြင့်လှသည့် Chief Secretary for Ireland (အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ၏ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရာထူးပင် ရရှိခဲ့သည်။ Balfour (ဘယ်လ်ဖော) ၏ ဦးလေးမှာ Robert Cecil (ရောဘတ်ဆဲဆီလ်) ဟု ခေါ်သော Lord Salisbury (လော့ဒ် ဆလစ်စ်ဘာရီ) ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းအချိန်က သူကိုယ်တိုင်လည်း ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည့် ယူဆချက်မှာ အကယ်၍ ဝန်ကြီးချုပ် Bob ဘော့ဘ် (အင်္ဂလိပ်နာမည် Robert ကို အတိုကောက်ခေါ်ဝေါ်ခြင်း) က သာ သင်၏ ဦးလေးဖြစ်ခဲ့မည်ဆိုလျှင် ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်ပြီး၊ သင်လိုချင်တာအားလုံး ရရှိနိုင်သည်ဟု ဆိုလိုရင်းဖြစ်သည်။
သို့သော် ဤယူဆချက်သည် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရှိသော်လည်း လှည့်စားမှုရှိနိုင်သဖြင့် ယခုခေတ်ဘာသာဗေဒပညာရှင်များက ဤ idiom (အထာနှင့်ပြောသောစကား) သည် ပိုမို၍ စောသော Slang expression (ဘန်းစကား) တစ်ခုဖြစ်သည့် ''all is bob'' (အားလုံး အဆင်ပြေပါသည်။) ဟူသော အသုံးအနှုန်းမှ ဆက်နွယ်၍ ပေါ်ပေါက်လာသည်ဟု ထင်မြင်ကြပါသည်။
Blog.oxforddictionaries.com မှ Simon Thomas ၏ What’s inaname? Bob’s your uncle and other curious expressions ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မူရင်းဆောင်းပါးကို ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
လူနာမည်များကို သုံးထားသည့် အင်္ဂလိပ်အသုံးအနှုန်းများ အပိုင်း (၁)
လူနာမည်များကို သုံးထားသည့် အင်္ဂလိပ်အသုံးအနှုန်းများ အပိုင်း (၂)
လူနာမည်များကို သုံးထားသည့် အင်္ဂလိပ်အသုံးအနှုန်းများ အပိုင်း (၃)
လူနာမည်များကို သုံးထားသည့် အင်္ဂလိပ်အသုံးအနှုန်းများ အပိုင်း (၄)
လူနာမည်များကို သုံးထားသည့် အင်္ဂလိပ်အသုံးအနှုန်းများ အပိုင်း (၅)
လူနာမည်များကို သုံးထားသည့် အင်္ဂလိပ်အသုံးအနှုန်းများ အပိုင်း (၆)
လူနာမည်များကို သုံးထားသည့် အင်္ဂလိပ်အသုံးအနှုန်းများ အပိုင်း (၇)
Permalink Reply by Nyein aye khaing on October 9, 2015 at 12:12
Great, thanks for such usage,
Permalink Reply by Jasmine Jasmine on October 9, 2015 at 15:14
Permalink Reply by Tunminzaw on October 9, 2015 at 15:56
Permalink Reply by aungzawoo on October 10, 2015 at 23:28
Thanks for knowledge.
Permalink Reply by Wendy Snow on October 12, 2015 at 23:50
Permalink Reply by htaylim on August 4, 2016 at 19:28